काठमाडौं, ६ फागुन । म डा. रञ्जित शाह, सरुवा रोग विशेषज्ञ हुँ। हामी तपाईंहरूको र्‍याल (थ्रोट स्वाव) संकलन गर्न आएका हौं। तपार्इंहरू डराउनु पर्दैन। कृपया
काठमाडौँ, ६ फागुन । बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रका महिलामा अझै पनि दुईवटा कालको पीडा कायमै रहेको छ । ती दुई पीडामा एउटा जतकाल (सुत्केरी) र अर्को महाकालीको जोखिमपूर्ण ट्युब पार
काठमाडौँ, ६ फागुन । कोभिड नाइन्टिन (कोरोना भाइरस)को प्रकोप फैलिएको चीनको वुहानबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीको दैनिकी खरिपाटीमा खेलकुदमा बितिरहेको छ । रोग फैलने त्रास रहेका वरपरका वासिन्दाले विस्तारै कुरा बुझ्न
काठमाडौं, ५ फागुन । अमेरिका जान भिसा प्रोसेसका लागि बैक ब्यालेन्स् देखाउन भनी ६० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरु भक्तपुर ठिमीबाट आइतबार बेलुका
धनुषा, ५ फागुन । ४० वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । अर्का एक व्यक्ति भने फरार छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा २५ वर्षीय नरेश
काठमाडौँ, ५ फागुन । भक्तपुर खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका डा. सलिमा कक्षपति यतिखेर धेरै खुसी भएका छन् । चीनमा बन्धकझँै बसिरहेकी उनलाई कहिले नेपाल जाऊँजस्तो लागेको थियो । चीनमा हुँदा खाना,
काठमाडौं, ४ फागुन । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले पूर्व आइजीपीहरुलाई घरमै पुगेर भेटिरहेका छन् । उनले गत हप्ता पूर्व आइजीपीहरु खड्गजीत बराल र दुर्लभकुमार थापालाई भेटेका छन् । आफूभन्दा
काठमाडौँ, ४ फागुन : प्रहरीले गोँगबु नयाँबसपार्क क्षेत्रमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न ५७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरीवृत्त महाराजगञ्जको टोलीले शनिबार राति चलाएको शुद्धीकरण अभियानमा गेष्ट हाउसका सञ्चालकसहित ५७
काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नामबाट खोलिएको वेबसाइट दुरुपयोग भएको छ। उक्त साइटमा ‘पोर्न’ भिडियो कहाँबाट कसले अपलोड गर्यो भन्ने खुल्न सकेको छैन। केपीशर्माओली डटकममा अश्लील सामग्री
काठमाडौं, ४ फागुन । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको चीनको हुबेई प्रान्तस्थित वुहानबाट आइतबार १ सय ७५ जना नेपालीलाई नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमार्फत स्वदेश ल्याइएको छ। चीनबाट १ सय ७५ जना
माली, ४ फागुन । मालीको मोप्ती क्षेत्रस्थित आदिवासी बासिन्दाको बाहुल्य रहेको एक गाउँमा हतियारधारी समूहको आक्रमणमा ४० जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । यसमा ९ जना सुरक्षाकर्मी पनि संलग्न रहेका
ललितपुर, ३ फागुन । महानगरीय प्रहरीवृत्त सातदोबाटोले विभिन्न स्थानमा जुवातास खेलिरहेका ११ जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १४ नखीपोटमा रहेको सुरज बस्नेतकोे घरको दोस्रो तलाबाट जुवातास